Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းခြင်း အပိုင်း-၂
Falcon June 18, 2014 at 12:36 AM
အ၀တ်အစား.... အပြင်အဆင် အဟန့် ကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်...။ ကျည်ကာ တွေက .... အနော်ရထာ.. စစ်ရေးလေ့ ကျင့် မှုတုန်း က ကျည် ကာတွေလောက် .. မကြီး တော့ သလိုပဲနော်..။ အင်္ကျီ တွေကို လဲ.. အိပ်တွေအများကြီး နဲ့ လက်မောင်း မှာ.. ကပ်ခွာ တွေနဲ့.. ဟာတွေ.. ကျွန်တော် တို့က ဆင်ပေး စေချင်တာ...။ စစ်သည် တိုင်း ကို... ဆက်သွယ် ရေး စက်တွေ ပေးထား စေချင်တာ လည်း တကယ့် ဆန္ဒ တစ်ခု ပါ..။ ဆက်သွယ် ရေးစက်က ရန်သူ့လက် ရောက်သွား ရင်.. အန္တရာယ်များ တယ် ဆို ပေမယ့်.... ကာကွယ် နိုင်တဲ့ နည်း လမ်း တွေရှိပါတယ်..။ရှေ့ တန်းက မြန်မာစစ်သား တွေအကြမ်း ခံ၊ အငတ် ခံ ပြီး တိုက်နိုင်တာ.. ၊ မာ ကြော တဲ့ အကြောင်း တွေ ကျွန်တော် တို့ အမြဲဂုဏ်ယူ ၀ံ့ ကြွား စွာ ပြောနေကြပေမယ့်....၊ ငပျော ဖက်ကလေး ခင်း ပြီး ထမင်း တပုံ လေးယောက် ဖြစ်သလို စား နေတဲ့ ပုံ လေး တွေကို ... ထိုင်း တို့.. ဘ တို့ စာမျက်နှာ တွေမှာ ဖေါ် ပြပြီး ဟား နေကြတာ ကို ... မကြည့် ရက်တော့ ဘူးဗျာ..။ တာရှည် ခံတဲ့ အစား အသောက် တွေ... စည်သွတ်ဗူး ကောင်း ကောင်း တွေ ဖန် တီး ပေးကြပါဗျာ..။ တာဝန်ရှိသူများ က ... ဒါတွေ ဖြတ်သန်း ခဲ့ ဖူး သူတွေဆို တော့... ကျွန်တော် တို့ဒီက ထိုင် ပြောနေရုံ ဆို တာ ထက်တော့ လုပ်ပေးချင်ကြမှာ ပါ..။ လုပ်ပေးမယ် လို့ယုံ ကြည် ပါတယ်..။
aungnaing thumn June 18, 2014 at 1:04 AM
ဆောင်းပါး ကအရမ်းကောင်းပါတယ် နားမလည်မသိခဲ့ တာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့ ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ
Aunglan Takon June 19, 2014 at 10:18 AM
Falcon June 23, 2014 at 10:32 PM
ကိုအောင်လံတံခွန်.... ကျွန်တော်က သာ မန်အ ရပ်သား တစ်ယောက်ပါ..။ ကျွန်တော့် စိတ်ရင်း နဲ့ ပြောတာ လေး ကို အသိအမှတ်ပြု ပေးလို့ ကျေး ဇူး တင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် တို့အား လုံး ဟာ... မတူ ညီတဲ့.. ရပ်ဝန်း တွေမှာ ရှင်သန်နေကြပေမယ့် .. နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ နေရာ မှာ တော့...မကွာ ခြား ဘူး လို့ယုံ ကြည်ပါတယ်..။ အခြား လူ တွေပြောနေသလို.. ကျွန်တော် တို့ အား လုံး က တတ်နိုင်တဲ့ တစ်ထောင့် တစ်နေရာက.. နိုင်ငံကို ကာ ကွယ် နေကြတာ မှန်ပေမယ့် စစ်တပ်လောက်.. တော့ တစိုက်မတ်မတ် ကာ ကွယ် နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ကျွန်တော် တို့က မစွန့်နိုင်ဘူး..။ စစ်သား တွေက လည်း အသက်စွန့်၊ ခနွ့ာ စွန့် စွန့် ချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး....။ အား လုံး မှာ လည်း မိသား စု ကိုယ် စီနဲ့။ ဒါပေမယ့် စစ်သား များ ဟာ... တာဝန်ကို က စွန့်ရတဲ့ တာ ၀န်ဖြစ်နေတယ်..။ မစွန့်ချင်သူ များ အတွက်..၊ မစွန့် သင့် သူ များ အတွက်... သူတို့ စွန့်လွှတ်ပေး နေကြတယ်...။ အဲဒါကို... နားလည်သူ အများကြီး ရှိပါတယ်..။ တပ်မတော် သား များ ဘယ်တော့ မှ စိတ်ဓတ်မကျပါနဲ့...။ သံမဏိလို မာကြော ပြီးသား သူ တွေ ဖြစ်ပေမယ့် လည်း ပြည်သူ့ မေတ္တာ တော့ လိုချင်ကြ မှာ ပဲ လို့ ကျွန်တော် တို့ သဘော ပေါက်ပါတယ်..။ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်သူ တွေမှာ.... ထောက်ခံအားပေးမှု ဆို တာ ရလာ စမြဲပါပဲ..။
အတိတ်နဲ့ လက်ရှိ အခြေ အနေကို ကျွန်တော် တို့ခွဲခြား ပြီး မြင်ပါတယ်။ တပ်မတော် နာမည် ထိခိုက်ခဲ့ရခြင်း တွေမှာ လည်း... ဘယ်သူတွေလုပ်ခဲ့ တယ်..၊ ဘယ်သူ တွေ မလုပ်ခဲ့ ဘူး ဆို တာ.. ကျွန်တော် တို့ ကွဲပြား ပြီး သိတယ်..။ ကျွန်တော် စစ်တပ်ရဲ့ လော် ဘီမဟုတ်ဘူး....။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ဟာ... အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို အမှန်တကယ် ကာကွယ် မယ့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ် လို့ မြင်နေရတာ မို့... စစ်တပ်အပြင် အခြား အတူ တူ ရပ်တည် ပေးရမယ့်... အဖွဲ့ အစည်းကို မမြင် မိဘူး။
တကယ့် စစ်သည်တော် တွေဆို... အသက် ဆယ် ချောင်း ရှိလည်း .. အဒီ ဆယ် ချောင်း လုံး ကို စစ်မြေပြင်မှာ ပဲ သုံး ပစ်လိုက်ချင် ကြမယ် ဆို တာ သေချာတယ်..။ ကျည်ကာ တွေဟာ... အဲလို မျိုး အသက်ဆက်စေနိုင်တဲ့ အဖိုး တန် အကာ အကွယ်တွေပါ..။ တန်းဖိုး ရှိလှတဲ့ သူတို့ရဲ့ မျိုး ချစ်စိတ်၊ တိုက်ရည် ခိုက်ရည်၊ နှစ်ရှည် လများ လေ့ ကျင့် ထား တဲ့ တတ်မြောက်မှု ..၊ နိုင်ငံကို ကာ ကွယ် ချင် စိတ်... အဲဒါတွေကို ရန်သူရဲ့ ကျည် တစ်တောင့် နဲ့ အလဲအထပ်မလုပ်နိုင်ဘူး...။
ကျည် ကာ တပ်ဆင် ပေးလိုက်ရင်... စစ်သည် တွေ.. တိုက်ခိုက်ရည် တက်လာ မယ်..။ တက်ရဲ..၊ ပစ်ရဲ... ချိန်ရဲ လာ မယ်..။ ဒါတွေကလည်း အားသာ မှု ပါပဲ။ ဒီမှာ ရှိနေတဲ့ တပ်မတော် သား များ အား လုံး ဟာ... ဒါတွေကို ကျွန်တော် တို့ထက်တော့ အများ ကြီး သိတဲ့ သူ တွေချည်းပါပဲ..။
ဒီလို မျိုး ကိုယ် တိုင်က လည်း မလုပ်နိုင် ချိန်မှာ လုပ်နိုင်သူ၊ လုပ်နေကြသူများ ကို ကျွန်တော် က တော့ ခြွင်း ချက်မရှိ လို လား ထောက်ခံတယ်..။
တပ်မတော်သား များ ဖေ့စ် စဘုတ် မသုံး ရဘာညာ လုပ်ထား တဲ့ အမိန့်ကြီး ရှိပေမယ့် ကျွန်တော် က တော့ များ များသုံး ပြီး ပြည် သူနဲ့ထိတွေ့စေ ချင်တယ်..။ တရင်း တနှီး နေကြပါဗျာ..။ ဒါ မှ အမှန်သိလာ ကြမှာ ပါ..။ လျို့ဝှက် အပ်တဲ့ အရာ တွေကို တင်နေတာက လွဲရင်ပေါ့လေ......။ ဒါက တော့ ဆရာ တို့ပို သိပါတယ်လေ....။
ပြည်သူ နဲ့ လက်တွဲ ပြီး ပြည် သူ့ယုံ ကြည် မှု ကို လုံး လုံး လျား လျား ရယူ ပြနိုင်ကြပါစေဗျာ....။
Aunglan Takon June 24, 2014 at 1:30 AM
Falcon June 27, 2014 at 1:31 AM
ဆောရီး ကို အောင်လံတံခွန်..... ကျွန်တော် အပြောလော သွား လို့ပါ။ တင်နေကြတယ် လို့ဆို လို တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖေ့ ဘုတ်ပေါ်မှာ တပ်မတော် သား တွေအများကြီး ရှိတယ်..။ အရာရှိတွေလည်း ရှိတယ်..။ တချို့က တော့ တာဝန်အရသုံး နေကြပုံ ပါပဲ..။ အဲ ... ဘတို့ ယ တို့ က ကောင်တွေလည်း ရှိနိုင်တာ ပဲ....။ မတော်တဆ .... အချင်းချင်း tag လုပ်ကြ Share လုပ်ကြ၊ ၀င်ပြောကြ ရင်း နဲ့ စောင့် ကြည့် နေသူက ပုံ ဖေါ် မှန်း ဆနိုင်သွား မှာ စိုး လို့ပါ..။ ပါကစ္စတန် ဒဖန့်စ် ဖိုရမ်မှာ ဆို မြန်မာ အကြောင်း ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ခဏခဏ ဆွေး နွေး နေကြတယ်။ သူတို့သုံး ထား တဲ့ ဓတ်ပုံ တွေက .... ဒီက တင်တဲ့ ပုံ တွေ လည်း ပါတယ်..။ ဒီက မပြောထား တဲ့ အကြောင်း တွေလည်း ပါတယ်..။ ဥပမာ... အမြန်သွား တိုက်ခိုက်ရေး ကိုယ်ပျောက် ရေယာဉ် ၄၉၁ ကို ပဲကျွန်တော် တို့သိရတယ်..။ သူတို့ပြောနေတဲ့ အထဲမှာ ၄၉၂ အကြောင်း တွေပါနေတယ်..။ ကျွန်တော် ပြောနေတာ တွေက ... ဆရာတို့သိပြီးသား တွေဖြစ်မှာပါ..။ ကျွန်တော် စိုး ရိမ်မိတာ လေး ကို မဖြစ်ညစ်ကျယ် ညာဏ်လေး နဲ့ ပြောကြည့် တာပါ... ။ လ၀ တွေ ကို ၀ါးတားတား မြင်သွားမှာ စိုး လို့ပါ.....။
sai hein June 18, 2014 at 1:02 AM
ပိုစ့်အသစ်တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....ကိုရဲမိုးတောင် လိုင်းမှာ မတွေ့တာ တော်တော်ကြာပြီ...ပျောက်နေတယ်ထင်တယ်
sai hein June 18, 2014 at 1:06 AM
ကျည်ကာတွေက ပါးသွားတာတော့အမှန်ပဲ.....ကျည်တော့ တကယ်ကာနိုင်ပါစေဗျာ
Than Han Win June 18, 2014 at 3:03 AM
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးရော ပြောင်းလဲရဲ့လား.. အမေရိကန်က Real Time ကို Video ကြည့်ပြီး ခန့်ခွဲပြီး တိုက်နေပြီ။
MM June 28, 2014 at 11:31 PM
Real Time အထိတော့ ကျနော်တို့ မရသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်...။ ဆက်သွယ်ရေးကတော့ အရင်ထက် အဆများစွာ ခေတ်မှီလာပါပြီ အနော်ရထာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှာ သုံးသွားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစက်အတော်များများက ပြည်တွင်းထုတ်တွေပါ..။ စိတ်ချရတဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်..။
Kyaw Thu Htwe June 18, 2014 at 10:01 PM
၂၀၀၆ခုနှစ်မှာSTOL. CH. -701ကိုထုတ်လုပ်နိင်ပြီလိုပြောတယ်
Aunglan Takon June 19, 2014 at 9:53 AM
အပိုင်း ၃ရှိဦးမလား မသိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုမသိတယ့် သတိမထားမိလိုက်တယ့်dataတွေအတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
MM June 28, 2014 at 11:20 PM
အပိုင်း(၂)အထိပဲ အစ်ကိုရေ... နောက်ပိုင်းအင်အားဖြည့်တာတွေက လဝတွေပါလာပြီဗျ :D
John Andres June 30, 2014 at 11:16 AM
You clearly expressed your references are from Maung Aung Myoe’s book and the foreign defense websites, it means that MDW is not the official website of Myanmar armed forces and your presented figures are not the official figures. But why you and some comment makers worried about secrets!!!!
Because you are just copying and translating the data from many open websites.
Discussion is another matter.
There should be consistent in any kind of presentation.
Thura Linn June 25, 2014 at 5:40 AM
တစ်ကယ် တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ ဘာလို့မဆင်ရလဲဆိုတဲ့အမြင်ကကျွန်တော်မှာရှိနေတာ အခုမှပဲ သြော်ဒီလိုတော့လဲဟုတ်သားပဲ ဆိုပီးသဘောပေါက်သွားတယ် အားပေးတယ်ဗျာ ဂုဏ်ယူချင်တယ် မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ပါတ်သက်လာရင် တင်လို့ရသမျှ ပြောလို့ရသမျှ တင်ပါ ပြောပြပါဗျာ
Anson Wong August 6, 2014 at 11:27 PM
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ အားတိုင်းယားတိုင်းတက်ရေးနေသည့် ဖေ့ဘုတ်အမည် ရဲမိုး (Ye Moe) သည် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၄၁) ဆင်းဖြစ်သည်။ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၄၁)ဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၇)ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ(၆)ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်လောင်း(၇၇၇) ယောက် ကျောင်းဆင်းခဲ့သည်။ ရဲမိုးသည် ထိုထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို ဖြုတ်ထုတ်သတ်စဉ်မှာ အနားပေးခံခဲ့ရသည်။ အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့ ပြောရသော် စစ်တက္ကသိုလ်တက်စဉ် (၄) နှစ်၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်(၄) နှစ်သာ ရှိသော အတွေ့အကြုံနုနယ်သော တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးသာဖြစ်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်တွင် အဆင့်မြင့်တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးသူမဟုတ်ပေ။ ထို့နည်းတူ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ်(၂၉) ဆင်း ကြည်း ၂၀၇၆၅ ဗိုလ်ကြီးမောင်မောင်အောင် (ဖေ့ဘုတ်အမည် ယောင်နီဦး) သည်လည်း ၁-၄-၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းဆင်ပြီးနောက် ၁၉၉၅ တွက် ဆေးအဆင့်ကျသဖြင့် အရပ်ဖက်သို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။အကျဉ်းချုပ်ပြောရသော် ထိုသူတို့သည် တပ်မတော်တွင် လက်ချိုးရေတွက်နိုင်သော နှစ်ကာလအနည်းငယ် ခေတ္တခဏသာတာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးသူများဖြစ်သည်။ ထိုသူများ၏ စိတ်ဆန္ဒအလျောက် ပေါက်တတ်ကရပြောမှုများသည် စစ်တက္ကသိုလ်နှင့်သော်၎င်း၊ တပ်မတော်နှင့်သော်၎င်း မသက်ဆိုင်ပါဟု မိတ်ဆွေ တပ်မတော်အရာရှိအချို့မှ မက်ဆေ့ပို့လာပါသည်။